Shirweynaha Xisbiga S: oo ey aad ugu yar yihiin xubnaha ka soo jeeda dalka dibaddiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirweynaha Xisbiga S: oo ey aad ugu yar yihiin xubnaha ka soo jeeda dalka dibaddiisa
La daabacay lördag 6 april 2013 kl 09.00
Dalka Iswiidhen ayey bulshada ku dhaqani shantii ruuxba uu mid ku dhashay dalka dibaddiisa ama ey ugu yaraan labadisa waalid mid ka mid ahi uu ku dhashay dalka dibaddiisa, hase yeeshee aan tiro middaa u dhiganta laga dareemin hoggaammada ugu sarreeya ee xisbiyada dalka. Halka ey 6% dalka dibaddiisa ama ka soo jeedaan ama ku dhasheen dhammaan xubnaha u meteleya shir-weynaha xisbiga sooshiyaal-dimoqoraadiga uga socda magaalada Göteborg. Waa caqabad ballaaran, sida ay sheegtay Karin Pettersson, madaxa laanta siyaasadda ee war-geeyska Aftonbladet.
- Dhan markii laga eego waxay caqabad ku tahay habka dimoqoraadiyadda, maadaama ey jiraan xeeyn-daabyo hor-taagan sidii ey dadyoowgaasi ku meteli lahaayeen xisbiga. Dhanka kale waxaan aamin-sanahay in ay caqabad ku tahay siyaasadda qudheeda maadaama ey meesha ka maqan yihiin fikirrada kala duwan ee siyaasadda, sida ay sheegtay Karin Pettersson.
Shir-weynaha xisbiga S uga socda magaalada Göteborg oo ey ka qeyb qaadaneyaan xubno ka kala socda dhammaan degmooyinka, gobollada iyo ururrada taageersan xisbiga oo tiradoodu gaarsiisan yihiin 350 ayey 20 ka mid ahi asal ahaan ka soo jeedaan dalka dibaddiisa ama uu ugu yaraan labadiisa waalid mid ka mid ah ku dhashay dalka ibaddiisa. Halka sidoo kale aaney xubnaha xisbiga ee matalaya magaalooyinka Istockholm iyo öteborg aaney xubnaba ku laheyn. Waana masiibo xisbiga ku habsatay, sida uu sheegay Johan Büser, oo qudhiisu matalayo magaalada Göteborg. Siyaasiyiinta isku dhafani waa mid aan looga maarmin xisbi u baaxad weyn sida xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga, sida uu sheegay..
- Dhammaan ururrada iyo dhaqdhaqaaqyada aaney ka muuqan qoowmiyadaha kala duwan waa kuwo aakhirka qalala, waana dhacdo halis ah. Haddii qalalkaasi nagu dhacana waannu ku guul-dareeysaneynaa inaan hananno taageerada shacabka oo ey adag tahay si dib loogula soo noqdo.Sidaa daraadeed ayay amuurtani hawo la neefsado ugu tahay in la helo siyaasiyiin isgugu dhex jira qowmiyado kala duwan.